Kaadị Azụmaahịa Okwu! | Martech Zone
Okwu see na ngọngọ a di na nwunye izu gara aga na ndị na-ede blọgụ nọ na-ada ụda! Wordle bụ ngwa Java nke na-agbanwe gị igwe ojii n'ime ihe mara mma.
Echere m Okwu dị jụụ, mana ọ bụchaghị ihe ederede.
Taa ka m kpara maka Nkọwa. Otu n'ime ndị folks na nnọkọ, Linda Watts, nyefere ya kaadị na ọ ozugbo etinye a ọnụ ọchị na ihu m!
Linda nwere nchịkọta ha niile (yana ụfọdụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche), nke ọ bụla lekwasịrị anya na isiokwu na ahịrịokwu dị iche iche, ha niile na ozi kọntaktị ya na azụ! Lee ka o siri bụrụ ihe okike! Echere m na ọ bụrụ na m bụ ụmụ okorobịa Wordle, m ga-akwụ Linda n'ọrụ ma tinye ya na-elekọta nkewa kaadị azụmaahịa!
Linda bụ Webmaster afọ 9 gara aga ma bụrụkwa ihe okike, nwee ọedụ na ịnụ ọkụ n'obi. Agwara m ya okwu banyere ịbụ geek - ntinye ya na klaasị ahụ gbakwunyere nke ukwuu.
Ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị ịkụzi ihe Ngwọta BitWise Sharpminds ihe, m na-amụta ọtụtụ ihe n'aka ndị bịara ya na m na-apụ apụ na-enwe mmetụta dịka m mụtara karịa ka m kuziri.
Linda na-ele anya ugbu a maka oru ohuru dika Web, Web 2.0, na Biputa Technology Coach. Nwere ike ị kpọọ ya oku maka ụfọdụ echiche mbụ! A sị na m chere echiche banyere echiche a mgbe m kwuru banyere ya ahọta kaadị azụmaahịa izu a! Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na Linda na-achọ ọrụ oge niile - ị kwesịrị ịjụ ma ọ bụrụ na ị nwere ohere maka ndị na-ere ahịa webata, n'agbanyeghị.
Tags: kaadị azụmahịamkpadoigwe ojiitags
Jul 31, 2008 na 10:13 PM
Daalụ maka Doug a. M re-tweeted gị mbụ tweet n'ihi na m na-amasị ya nke ukwuu. Ejiri m Wordle na-egwuri egwu ruo awa ole na ole mgbe m laghachiri na igwe ojii dị iche iche 3 nke m tinyere na mgbidi m na-arụ ọrụ.
Ugbu a, echere m na enwere ike ịnwe ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị mma iji ndị a.
Mgbe anyị chere echiche banyere eserese - anyị anaghị atụle ike nke okwu dị ka ntọala maka ihe na-esitekarị na foto.
Foto nwere ike ịkwụ ọnụ otu puku okwu mana igwe ojii okwu nwere ike ịdị ọnụ karịa ka ị nwere ike ikwu na obere oghere nke kaadị azụmaahịa!
Aug 1, 2008 na 7: 46 AM
O kwuru nke ọma, Lynn!
Aug 1, 2008 na 8: 51 AM
Daalụ maka ebube kwuru na taa blog. Lee ụzọ m ga-esi malite ụbọchị m!
Kaadị m na-adịgide adịgide nọ na-eche igbe ozi m mgbe m laruru ụlọ ụnyaahụ. M ga-ezitere gị ihe nlele. Amaara m na ịdị mma nke Moo Printing ga-amasị gị.
Aug 1, 2008 na 9: 12 AM
Enwere m ike ịgbakwunye m obi ụtọ nnọkọ ahụ ụnyaahụ. I meela ka m chegharịa maka ojiji maka blọọgụ ma aga m arụ ọrụ na ya.
Aug 1, 2008 na 9: 36 AM
Daalụ Linda! Ọ bụ nnukwu ìgwè ndị mmadụ bịara - nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe mgbe niile.
Aug 1, 2008 na 1:09 PM
Kwesịrị ịhụ Okwu n'anya. Na-akpali mmasị na m mere otu izu gara aga maka m "kaadị azụmahịa" ihe onwunwe na saịtị. Enwere m mmasị na eziokwu na ị nwere ike ịgbanwe agba agba. Okwu nkume. Nwere ike ịhụ nke m ebe a http://cardsfreebusiness.com/
Aug 1, 2008 na 1:18 PM
Agbakwunyere onye a na nchịkọta m
Aug 1, 2008 na 3:38 PM
Chei, lee ka o si dị mma !!! Obi dị m ezigbo ụtọ